Yaya Toure oo kaga digay Mikel Arteta inuu ogolaado shaqada tababarka ee kooxda Arsenal… (Maxay tahay sababta?) – Gool FM
(London) 19 Dis 2019. Laacibkii hore ee kooxda Manchester City Yaya Toure ayaa ka digay in Mikel Arteta uu ogolaaday inuu aqbalo shaqada tababarka Arsenal waqtiyada soo socda.
Kabtankii hore ee Arsenal ayaa wadahadallo kula jiray Gunners isbuucan, waxaana uu u muuqdaa inuu la wareegi doono shaqada garoonka Emirates, waxaana lagu dhawaaqi doonaa ka hor bilowga isbuuca soo socda.
Shaqsiyaadka qaar ayaa ka digaya inay jirto cabsi laga qabo in guul darrooyin hor leh ay soo wajahdo Gunners sababa la xiriira qibrad yarida Mikel Arteta iyo kororka jahwareerka kaddib markii shaqada laga ceyriyay Unai Emery bishii lasoo dhaafay.
Laacibkii hore reer Ivory Coast ee Yaya Toure ayaa wareysi uu ku bixiyay wakaaladda wararka ee Associated Press wuxuu ku sheegay:
“Aad bay u adkaan doontaa, sababtoo ah Arsenal way dagaallameysaa, laakiin waxaan u maleynayaa haddii macalimiinta Arsenal la dhageysan lahaa, isla markaana la qaadi lahaa wadadiisa waxaa suurtogal ah inuu guuleysto”.
“Markaad hogaamiso koox cusub waxaad u baahan tahay taageerida guddiga sarre ee maamulka kooxda sidoo kale inay ku dhageystaan si aad u sameyso wax walba oo aad u baahan tahay”.
“Manchester City waxay heysataa dhaqaalo badan si ay u sameyso saxiixyo badan, sidaas darteed xallada aad ayey u adkaan doontaa”.
“Mikel Arteta waa nin caqli badan isla markaana qibrad badan u leh kubada cagta, waxaan u maleynayaa inuu ku fiicnaan doono Arsenal sababtoo ah waxay u baahan tahay tababare leh maskax cusub iyo diyaarin cusub”
“Arsenal waxay u baahan tahay aragti cusub Mikel Arteta ayaana taas sameyn kara”.